Okukhumbuzayo: Ucwaningo lwamahhala lwe-inthanethi kanye nocwaningo lweqembu lokugxila | Martech Zone
ULwesine, April 3, 2014 ULwesithathu, April 2, 2014 Douglas Karr
Isisekelo sokukhumbula kabusha iyithuluzi elisebenziseka kalula eliletha ucwaningo lohlobo lweqembu ekugxilwe kulo futhi likuvumela ukuthi uxhumane nezethameli zakho ukuqonda ukuthi kungani izethameli zakho zicabanga futhi zenze njengoba zenza futhi zithole imininingwane emisha engenzeka yebhizinisi lakho. Izethameli zifaka phakathi amakhasimende akho, abasebenzi, amalungu, abatshalizimali, abafundi kanye namanethiwekhi omphakathi.
I-Recollective Baseline iletha inqubo yokuhlola isimilo nokuziphendulela okungokomzwelo ngamaqembu okugxila ngaphakathi-kuwe ku-inthanethi futhi ikunikeze ukufinyelela kuthuluzi elifanayo elisetshenziswa izinzuzo. Abasebenzisi bensizakalo bafuna impendulo ngemibono eyingqayizivele, bathole ukuqonda okungcono kwamakhasimende abo futhi bahlole imiqondo yesikhangiso neyokumaketha. Kwipulatifomu yamahhala, elungiselelwe iselula, amaqembu abantu angabandakanyeka futhi abuzwe imibuzo evulekile abangayiphendula ngemibhalo, izithombe, amavidiyo, amafayela, nezinye izivivinyo zemithombo yezindaba ezinothile - kufaka phakathi omaka abahlanganyelayo abanemephu yokushisa yemiphumela - ngenqubo elula nehlelekile.
Thumela ama-design, ama-logo noma yini enye kunoma iyiphi ifomethi yefayela futhi abantu basebenzise omaka abasebenzisanayo ukukhomba ngqo abakuthandayo nabangakuthandi esithombeni. Umdali uzolethwa nemiphumela ebalazweni lokushisa.
Eqondiswa - Ababambiqhaza baqondiswa ngemisebenzi ebenza bahlanganyele futhi babe nentshisekelo.
Social - Ababambiqhaza bangaxhumana bodwa online futhi umongameli angaqondisa ingxoxo futhi abone imiphumela.
Hambayo - Ixhaswa ngokuphelele kuwo wonke amadivayisi eselula, kufaka phakathi ama-Smartphones, amaphilisi kanye nama-laptops.
Ama-Analytics - Amathuluzi okusungula enza lula inqubo yocwaningo. Imibiko eningiliziwe nezinketho zamashadi ezicebile zenza lula ukutolikwa kwedatha.
International - I-interface ye-software okwamanje inikezwa ngesiNgisi, isiFulentshi, iSpanishi, isiPutukezi (iBrazil), isiJalimane, isiNtaliyane nesiDashi.
Landelela izimpendulo zakho nge Isisekelo sokukhumbula kabusha ngesikhathi sangempela usebenzisa amathuluzi wokuhlaziya amasha. Phequlula idatha engenayo njengezibuyekezo ezibukwayo, sebenzisa imibiko, noma ukhiqize okubhaliwe.
Tags: amaqembu okugxilaizinhlolovo mobileucwaningo onlineisisekelo sokukhumbula kabushaucwaningoamanethiwekhi omphakathiUkuhlolaucwaningo lomsebenzisi